Soomaaliya oo laga bIlaabay Hirgelinta Tiknoolajiyad cusub – Balcad.com Teyteyleey
Soomaaliya oo laga bIlaabay Hirgelinta Tiknoolajiyad cusub
Soomaaliya ayaa bilowday tiknoolajiyad cusub oo loogu talagalay in lagu bixiyo xalal farsamo si looga hortago qaar ka mid ah caqabadaha hortaagan dalka.
Warbixin ka soo baxday Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ayaa Axaddii sheegtay in aragtida hubka, iRise, ay tahay in la maal-galiyo dhalinyarada iyo hoggaamiyayaasheeda mustaqbalka, iyagoo soo jiidanaya maal-galiyayaal bulsheed oo taageeri kara shirkadaha dhalinyarada.
“Xaruntu waxay u fidisaa ganacsatada yaryar ee ah horumarinta teknoolajiyada iyo iskaashiga, oo ay ka mid yihiin tababaro ganacsi, hagid, isku xirnaanta internetka bilaashka ah, qiimeynta mashruuca iyo taageerada inta lagu jiro marxaladaha isbitaallada ee bilaabitaankooda,” ayaa lagu yiri Warbixinta UNSOM.
Xaruntu waxay sidoo kale siin doontaa cilmi-baaris iyo goob shaqo oo loogu talagalay dadka dhalinyarada ah ee doonaya inay isticmaalaan tiknoolajiyada si ay ganacsi u wataan
iRise Hub kaas oo bartilmaameedsanaya dhalinyarada awood u leh, Bangiyada ku jirta dhulka bacriminta ee tiknoolajiyada iyo isticmaalka baahsan ee telefoonka gacanta ee Soomaaliya, si loo gaaro himilooyinkeeda.
Cabdixakim Caynte, oo ah ganacsade 32-jir ah iyo aasaasaha ururka iRise Hub ayaa sheegay inay doonayaan inay bixiyaan barxad ay dhallinyaradu awood u yeelan karto inay kasbadaan awooddooda iyaga oo la imaanaya fikrado ku saabsan ganacsiga.
Mr. Caynte wuxuu sheegay inay rumaysan yihiin inay tahay waqtigii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u soo jeedin lahaayeen fikradaha, sheegashada iyo maalgashadooda mustaqbalkooda, iyagoo rajeynaya inay xal u keenaan caqabadaha baahsan ee dalka.
“Waxaan dooneynaa inaan hubinno inaan ku darno ajandaheenna annaga oo leh Hadafyada Horumarinta Bulshada ee Caalamiga ah (SDGs). Haddii aad eegto hadafyada, mid kasta oo ka mid ah waxay saameyn ku leedahay Soomaaliya. Tusaale ahaan, SDG mid oo ah in la joojiyo faqriga, waa aag aan nahay xarun cusub oo ganacsi oo dhalinyaro ah, oo doonaya inay wax ka qabtaan, “ayuu yiri Caynte.
Sida laga soo xigtay hay’adda UNSOM, bilowga IRise Hub waxay fulineysaa rabitaan ah in lagu abuuro dhaqanka tiknoolajiyadda dhalinyarada Soomaaliya oo ka dhigan %80 boqolkiiba dadka dalka, halka ay taageerayaan isbeddelka dhaqaale ee dalka.
Caynte ayaa sheegay in dhiirrigelintooda ay ka yimaadaan rabitaanka inay kobcaan ayna fikrado cusub u keenaan nolosha. Wuxuu sidoo kale sheegay in dadaalkaas uu dhiirrigeliyay waayo-aragnimooyinka Kenya, Itoobiya iyo Rwanda, kuwaas oo haysta xarumo cusub oo tiknoolajiyad cusub.
“Ku dhowaad %25 boqolkiiba dadka oo idil waxay heli karaan adeegyo mobile. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan hore u qabnay teknooloojiyada hal dhinac ama mid kale. Waa awood xooggan oo aan ku xisaabtanno, “ayuu yiri Caynte.
Caynte iyo saaxiibadiisu waxay rajeynayaan inay iskaashi la sameeyaan shabakadaha caalamiga ah ee ganacsadaha tiknoolajiyada iyo kuwa kale ee farsamada.
Waxay sidoo kale qorsheynayaan inay dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada iyo ka qaybgalka dhalinyarada si ay u gaaraan Himilooyinka Horumarinta ee Qaramada Midoobay (SDGs).
Dhanka kale QM waxay aqoonsaneysaa doorka dhalinyarada ee dhiirigelinta mashaariicda iyo mashaariicda casriga ah ee taageera kobcinta bulshada, dhiirigelinta hal-abuurka iyo fikradaha cusub ee fura waddooyinka cusub si loo xalliyo dhibaatooyinka caalamiga ah.
The post Soomaaliya oo laga bIlaabay Hirgelinta Tiknoolajiyad cusub appeared first on Ilwareed Online.
Madaxwayne Goboleedyadda Somalia oo ku sugan Kismaayo, Muxuu ka dhigan yahay Isu Imaatinkoodu?